Ithegi: cacisa | Martech Zone
Maka: icace gca
Incoko ye-Gong's analytics engine ihlalutya iifowuni zentengiso kwinqanaba lomntu kunye nelokuhlanganisa ukukunceda uqonde ukuba yintoni esebenzayo (kwaye yintoni engasebenziyo). I-Gong iqala ngokudityaniswa kwekhalenda elula apho iskena ikhalenda nganye yokuthengisa ekhangela iintlanganiso zentengiso ezizayo, iifowuni, okanye iidemo. U-Gong emva koko ujoyina umnxeba wentengiso nganye ocwangcisiweyo njengendibano yesiqhelo yokurekhoda iseshoni. Zombini iaudiyo kunye nevidiyo (ezinje ngezabelo zescreen, imiboniso kunye needemo) ziyarekhodwa
NgoLwesihlanu, Matshi 27, 2015 Douglas Karr
Ngokwophando olwenziwe yiForrester, iipesenti ezingama-62 zeenkokheli zentengiso zifuna ukubonakala ngakumbi kwintengiso, kodwa kuphela ziipesenti ezi-6 eziqinisekile ukuba zifumana ukuqonda okuchanekileyo. Ngenxa yoko, iinkokeli zentengiso ziyasokola ukuqonda ukuba zeziphi ii-reps, amaqela, kunye nomxholo oyinyani osebenzayo kumjikelo wentengiso-ubuncinci de kube amathuba aphumelele okanye alahlekile. I-ClearSlide, iqonga lokubonisa elenzelwe ukuthengisa, likhuphe ukuzibandakanya kunye nokuLandela, amanqaku amatsha anceda iinkokeli zentengiso ukuba zibeke esweni, zihlalutye kwaye